ihe nkiri / vr
Okwu mmalite nke imewe ụlọ, atụmanya ọrụ ya dị mma
site ha na 20-05-06
Okwu Mmalite nke Nhazi ụlọ, n'ụkpụrụ sara mbara, bụ ịdọ aka ná ntị nke na-amụ ụkpụrụ ụlọ na gburugburu ya. Nhazi bụ ọzụzụ nke gbasara teknụzụ injinia na ụmụ mmadụ na nka. Chitelọ ọrụ nka na teknụzụ metụtara ọrụ ụlọ, yana akụkụ mara mma na nka nke nka dị ka nka bara uru, ọ bụ ezie na ha doro anya n'ụzọ doro anya mana ha nwere njikọ chiri anya, na ibu ha dabere na ọnọdụ akọwapụtara ya na usoro ụlọ ahụ. Dị iche na ezigbo iche. Architectural imewe na-rụrụ mgbe mkpebi nke ụlọ lo ...
China Railway Construction Changyang International City Wuru Residential withlọ na Deep Vi ...
Ọnọdụ nke ụlọ na-esite n'echiche na n'ike mmụọ nsọ ọ na-ebu, na njide nke obi bụ iji nweta ezigbo mma. China Railway Construction · Changyang International City, emi odude ke Changyang, Fangshan, bụ iji wuo a n'ụlọ na miri emi dị mkpa ma na-eme ụkpụrụ ụlọ mma nke ika mmadụ mmezi. Vitality = anwụ + ahụ ike + nkasi obi + iche iche China Railway Construction-agbaso echiche ndị mmadụ dabeere a 280,000-square-mita elu-elu bi obodo-China Railway Construction · Changyang International City. Ihe odide ụlọ dị mfe na ...
China Railway Construction Changyang International City: Sunshine Building Anxin Community
Maka ndị mmadụ, ndụ bụ ihe kachasị mkpa, yana ahụike na nchekwa na-eche maka ịtụ egwu ndụ. China Railway Construction · Changyang International City, iketa ebube nke ụwa n'elu 500 isi ụlọ ọrụ, na-agba mbọ ka ike ika obibi na ndịda ọdịda anyanwụ Beijing na a elu ogo nke na-elekọta mmadụ ọrụ nke ika Central ụlọ ọrụ, na-elekwasị anya anwụ na-acha na ahụ ike oghere na-eke a mma obodo. 280,000 square mita nke dị ọcha anwụ mma residential obodo China Railway Construction · Changyang International City-agbaso echiche nke humanism, na-elekwasị anya ike ndụ, anya pl ...
Kedu ihe bụ ụkpụrụ ụlọ na ụkpụrụ ya
Kedu ihe bụ ụkpụrụ ụlọ ihe owuwu ụlọ na-ezo aka na tupu e wuo ụlọ ahụ, onye nrụpụta, dịka ọrụ ọrụ ahụ si dị, na-eme atụmatụ zuru oke tupu nsogbu dị ugbu a ma ọ bụ enwere ike na usoro iwu na usoro ojiji, wee wepụta ihe na nsogbu ndị a A na-egosipụta eserese na akwụkwọ. Dị ka ihe ndabere maka nkwadebe ihe, nhazi ihe owuwu na ụdị ọrụ dị iche iche na arụpụta ọrụ na ọrụ owuwu ihe. Ọ na-adaba adaba maka ịrụ ọrụ ahụ dum n'otu usoro dịka usoro ejiri nlezianya tụlee ...
Adreesị:A2301, Poly Polye Plaza, Tianhebei RD., Tianhe District, Guangzhou, China
Ekwentị:+86 8398 0471
Achara Joint Earring, Ws2812b Led warara, Gburugburu ọla ntị, Ọla ntị ọla edo, Gold Hoop ọla ntị 18k, Ihe Ntinye Gold Hoop,